Jamie Carragher Oo Su'aal Wayn Galiyay Heshiiska Ay Man City La Gaadhay Nathan Ake. - Gool24.Net
Jamie Carragher Oo Su’aal Wayn Galiyay Heshiiska Ay Man City La Gaadhay Nathan Ake.
July 30, 2020 Mahamoud Batalaale
Khabiirka Sky Sports ahna halyayga Liverpool ee Jamie Carragher ayaa su’aal wayn galiyay heshiiska ay Manchester City kula soo wareegayso difaaca kooxda Bournemouth ee Nathan Ake.
Kooxda heerka labaad u dhacday ee Bournemouth ayaa aqbashay dalab 41 milyan gini ku qiimaysan oo ay Man City ka gudbisay difaaca Nathan Ake laakiin Carragher ayaa aaminsan in ay jiraan arimo aan heshiiskan ku haboonayn oo ka soo dhex bixi doonaa.
Nathan Ake ayaa hore ugu soo ciyaaray kooxda Chelsea laakiin waxa uu heerka labaad ula dhacay kooxda Bournemouth wuxuuna ka mid yahay ciyaartoyda tayada sare leh ee kooxaha waa wayni ka soo qaadan doonaan Bournemouth, Watford iyo Norwich City.
Jamie Carragher ayaa aaminsan in Ake iyo Laporte ayna suurtogal noqon doonin in ay shaxda Guardiola ku soo wada baxaan wuxuuna ku dooday in difaacyada midig layaasha ahi ay ka iska garab ciyaari karaan balse ayna iska garab ciyaari karin difaacyada bidix layaasha ahi.
Jamie Carragher ayaa markii la shaaciyay dalabka Man City ee ay aqbashay Bournemouth ee Ake waxa uu bartiisa twitterka ku soo qoray: “Anigu waxaan jecelahay Nathan Ake wuxuuna ku haboon yahay Man City laakiin iyada oo uu joogo Laporte oo uu damaanad qaad u haysto in uu ku soo bilawdo, anigu kumaan qancin in laba difaac dhexe oo bidix layaal ahi ay wada shaqayn karaan?”.
Jamie Carragher ayaa qoraalkiisa sii raaciyay: “Waan ogahay in ciyaartoyda midig layaasha ahi ay wada ciyaari karaan, laakiin waligay maan dareemin in dhinaca kale ay u wada shaqayn karaan, difaac bidix ama saddex difaac dhexe”.
Inkasta oo uu Guradiola haysto Laporte, Nicolas Otemandi iyo John Stones, waxa uu hadda la soo wareegayaa Nathan Ake oo markii hore lala xidhiidhinayay Man United.
Man City waxaa xili ciyaareedkan koobka Premier League si wayn uga sameeyay dhaawicii soo gaadhay Laporte ee uu Guardiola waayay badal fiican oo booskiisa u buuxiya.
Si kastaba ha ahaatee, Man City ayaa ku guulaysatay adeega Nathan Ake kaas oo la filayo in dhawaan uu soo gaadhi doono Etihad Stadium si uu heshiiska 41 ka milyan gini ah u dhamaystiro.